Samsung Galaxy J7 ကို Root လုပ်နည်း ~ mgkhainghtoo
Samsung Galaxy J7 ကို Root လုပ်နည်း
19:52 ေမာင္ခိုင္ထူး No comments
Samsung Galaxy J7 ကို Root လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် TWRP recovery နဲ့
Root လုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ TWRP လေးကိုကျတော်လဲတော်တော်လေးရှာလိုက်
ရပါတယ်။ တွေ့တဲ့လင့်တွေက အဆင်မပြေပါဘူး။ အခုကျတော်ရှာရင်း အဆင်ပြေတဲ့လင့်လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေမှု့ရှိပါက ပြောပေးပါ။
အရင်ဆုံး ဖုန်းထဲက OEM unlock ဆိုတာကို on ပေးရပါမယ်။
Enable USB Debugging on your device. (Settings > Developer Options > USB Debugging)
You need to enable OEM bootloader unlock in your developer options to install the TWRP recovery !. Go to > ‘Settings’ > ‘Developer Options’ > ‘Turn on OEM unlock’ on.
ပြီးရင်တော့ ကျတော်တို့ TWRP လေးကို Flash ပါမယ်။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။
Odin က PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ TWRP recovery tar ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို Download mode သွင်းလိုက်ပါ။
ပြီးရင် volume up တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Odin မှာ PASS ပြပြီး
ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့
TWRP recovery Flash ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
Recovery mode ကိုဝင်ပြီး SuperSU-update.zip လေးကို
install ပေးလိုက်ရင်တော့ ROOT အဆင်ပြေပါပြီ။
SuperSU-update.zip မရွိပါက Download ရယူလုိက္ပါ။
SuperSU-update.zip အား install ပြုလုပ်နည်း
၁။ SD card ထဲသို့ SuperSU-update.zip အားထည့်ပါ။
၂။ ဖုန်းကို Recovery mode ဝင်လိုက်ပါ။
၃။ install zip from sd card ကေနျပီး
၄။ SuperSU-update.zip အား install လုပ်ပြီး
iPhone iOS9မွ 9.0.2 ထိ iOS မ်ားကို Jailbreak ျပဳ...
Samsung Galaxy J5 & E5 Root လုပ္မယ္
How to Remove your password window8 & 8.1